Xeer ilaaliyaha Qaranka oo ugu Baaqay Warbaahinta Dalka inay ka qeyb qaadato Hormarka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Xeer ilaaliyaha Qaranka oo ugu Baaqay Warbaahinta Dalka inay ka qeyb qaadato...
Xeer ilaaliyaha Qaranka oo ugu Baaqay Warbaahinta Dalka inay ka qeyb qaadato Hormarka
Muqdisho (SONNA) Dr: Axmed Cali Daahir Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Soomaaliya ayaa ugu horeyn kaga mahad celiyay Warbaahinta Dalka howsha ay u haayaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan sida ay kaga qeyb qaateen masiibadii 14 Octobar ka dhacday Isgoyska Ex Soobe.
Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Soomaaliya Dr Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in ay tahay in lagu Amaano Warbaahinta Soomaaliyeed daruufaha ay ku shaqeeyaan ayna mudan tahay in lagu amaano doorkii ay ka qaateen gurmadkii loo sameeyay dhibaatadii 14 October.
Dr Axmed Cali Daahir Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Soomaaliya ayaa dhanka kale tilmaamay in ay tahay Warar qaar in ay ka fiirsato Warbaahinta Soomaaliyeed aysana ahayn in bulshada loo tabiyo maadaama ay yihiin kuwo gudbinaya muuqaal xun isagoona tusaale usoo qaatay weerarkii maleeshiyaadka nabad diidka ah ee Al shabaab ay dhawaan ku qaadeen Hotelka Naasa hablood2 ee Degmada Xamarweyne.
Dr Axmed Cali Daahir waxaa uu sheegay in looga baahan Wariyaasha Soomaaliyeed in ay ka qeyb qaataan horumarinta Dalka taasina ay ku imaan karto tabinta iyo xaqiijinta Wararka ay bulshada u gudbinaayaan.
Warbaahinta Madaxa banaan ee Dalka ayaa xusid mudan in ay door weyn ka qaadatay horumarinta Dalka inkastoo ay jiraan dhaliilo iyo dal- doloolo yar yar oo ku aadan qaabka tabinta wararka Dalka.
Previous articleAfar walaalo ah oo Hooyadoood iyo Walaashood ku waayey Qaraxii Soobe ee dhacay 14 Bishii Octoobar
Next articleBankiga aduunka oo Maalgalinaya dib u dhiska Goobaha laga Qabsadey Daacish ee Dalka Ciraaq